11. Eebe waa kan idinka Abuuray Dhoobo  ka dibna mid ah manida , ka dibna uu laba nooc (lab iyo dhaddig) aad  sameeyey. Naag No abid uuraystaan ​​iyo dhalaan, mana dhalo ogaanshaha Eebe. Oo ha dheerayn nolosha qofka, mana hoos ay da ', laakiin (hore u dhismay) Kitaabka (Lawh Mahfuz) . Indeed, taasina waa u fududahay Eebe .
Buugga waxaa ugu macno iyaga, waxa loogu yeero Tablighi Nishab in. Qoray mid ka mid ah aasaasayaasha ay. Buuggan waxaa ku dhawaad ​​laga leeyahay oo akhriyaan shirka kasta, aad iyo aad bay u akhri arooray Saxiixul Bukhaari. Buuggan waxaa ka buuxsamay Sixir, shirk, bid`ah, iyo xadiis xadiis-xadiiska been ah oo daciif ah. Sidaas waa kitaabka nolosha Ash Shahabah, oo iyaga dinamalkan, ka buuxsamay Sixir iyo sheekooyin ay run ahayn, iyo wixii la mid ah ...